पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् भदौ ९ गते मंगलबारको राशिफल – Bannigadhi Today
पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् भदौ ९ गते मंगलबारको राशिफल
धनराज साउँद २०७७ भदौ ९, मंगलबार ०७:४९
आज श्री शाके १९४२ बि।स।२०७७ साल भाद्र ९ गते मंगलबार इश्वी सन २०२० अगस्त २५ तारीख भाद्र शुक्लपक्ष सप्तमी तिथी विशाखा नक्षत्र ब्रह योग वणिज करण चन्द्रंमा तुला राशिमा १३ः१४ बजे सम्म पश्चात बृश्चिक राशिमा आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु गौरा सप्तमी, अभुक्ताभरण सप्तमी, महालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ, भक्तपुरस्थित मंगलकुण्डमा मेला,राष्ट्रिय धर्मसभा दिवस ९ज्यो।प।सरोज घिमिरे०
मेष राशि ९चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ० समय महत्वपुर्ण ढंगले ब्यतित रहनेछ । प्रियजनहरु सँगको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । गरीरहेको कार्यका क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । यात्रा मनोरञ्जन पुर्ण ब्यतित रहनेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा आम्दानीका श्रोतहरु सवल बन्नेछन । पारीवारिक साथ सहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ ।
बृष राशि ९इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो० प्रतिपक्षीहरु कमजोर रहनाले कार्य सम्पादनमा सहजता रहनेछ । बिभिन्न अवसरहरु प्राप्तहुने योग रहेता पनि समयको प्रयोगमा भने पछि परीनेछ । दिर्घकालिन फाईदा मुलक कार्यमा समय ब्यतित गरेमा उत्तम रहनेछ । स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ । मेहेनत अनुसारको फल प्राप्ती रहनेछ ।
मीथुन राशि ९का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह० मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । ब्यापार ब्यवसायमा बिशेष लाभ प्राप्त हुने समय रहकोछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । आम्दानिका श्रोतहरु सवल तुल्याउन आफ्नोकला कौशलको प्रयोग गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । सन्तान सुख प्राप्त रहनेछ ।
कर्कट राशि ९हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो० सम्पादित कार्यहरुमा सामान्य त्रुटिहुनाले कार्यक्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । भौतिक श्रोत साधनको परीचालनमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँ लगानिमा भने बिशेष साबधानि अपनाउनुनै उत्तम रहनेछ । मान्यजनहरुको मार्गप्रदर्शन अबलम्बन गर्दा निकै महन्वपुर्ण कार्यहरु सम्पादित रहनेछन ।
सिंह राशि ९मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे० कार्यक्षेत्रमा बिभिन्न अवसरहरु प्राप्त रहनेछन । पुराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन हर्षित तुल्याउनेछ । अधुराकार्यहरु सम्पादन गर्न समय उत्तम रहनेछ । बल तथा प्रराक्रमका क्षेत्रबाट समेत पुराना लगानि उठाउन सकिनेछ । यात्राक्षेत्रमा भने सामान्य तनाबको सामना गर्नु पर्न सक्नेछ ।
कन्या राशि ९टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो० स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानिको उत्तम प्रतिफल प्राप्त हुनेछन । भोज भतेर जन्यकार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । शुभ चिन्तकहरुको साथ सहयोगमा बृद्धिहुनेछ । कुल कुटुम्बहरु सगँको सम्बन्धमा भने सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ ।
तुला राशि ९र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते० नयाँकार्यहरुको सुरुवात गर्नका निम्ती शारीरिक आलस्यताले सामान्य समस्या दिलाउन सक्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा सामान्य तनाबको सामना गर्नुपर्नेछ । पारीवारीक मनोरञ्जनका निम्ती अधिक समय खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ । सम्पादित कार्यहरुको उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनाले मन हर्षित रहनेछ ।
बृश्चिक राशि ९तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु० आफन्तजनहरु सगँको सम्वन्धमा तनाब सृजनाहुन सक्नेछ । कार्यक्षेत्रमा भएको त्रुटिको कारण अरुबाट अपहेलित भएको महसुस रहनेछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु राम्रो रहनेछ । समय अनुरुप चल्न नसकेको अनुभुतिभने मनमा खट्कीनेछ ।
धनु राशि ९ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे० गरीरहेको कार्य क्षेत्रले मान सम्मान दिलाउन सक्नेछ । कार्यक्षेत्रमा बिशेष जिम्बेवारी बहन गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । अध्यन अध्यापनमा खर्चीएको समय उत्तम रहनेछ । आम्दानिका श्रोतहरु मजबुत तुल्याउन तत्कालिन कार्यहरु फाईदा मुलक साबित रहनेछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ ।
मकर राशि ९भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि० मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । भौतिक साधनको प्रयनेगमा समय ब्यतित रहनेछ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगनसिलताको कदर रहने समय रहेकोछ । मातृपक्षको स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुनाले मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्ने समय रहेकोछ ।
कुम्भ राशि ९गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द० कार्यक्षेत्रमा लगनसिलताको कमि महसुस हुनेछ । तपाइ द्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय गैर ब्यत्तिहरुले सहजरुपमा प्राप्त गर्नेछन । यात्रा मनोरञ्जन पुर्णरुपमा ब्यतित रहनेछ । मित्रजनहरुको सम्बन्धमा समान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । आटँ तथा शाहसको कमिले कार्यक्षेत्रमा तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मिन राशि ९दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि० नजिकका ब्यत्तिहरुबाट धोका हुनाले तपाइका गुह्यकुराहरु अरु सामु प्रस्फुटित हुनेछन । ब्यपार ब्यवसायमा अधिक लगानि नगरैकै बेस रहनेछ । आफ्नो सामान्य लापरवाहिले तपाईका माल सामानहरु गुम्न सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । यात्राका कारण सामान्य चोटपटकाको सामना गर्नु पर्ला ।